अष्ट्रेलियामा फेसबुकले न्यूज शेयर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै ! « MNTVONLINE.COM
अष्ट्रेलियामा फेसबुकले न्यूज शेयर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै !
सामाजिक सञ्जाल कम्पनी फेसबुकले अष्ट्रेलियाका समाचार साईटहरुलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा सामग्री शेयर गर्नबाट लगाएको रोक अन्त्य हुने भएको छ । अष्ट्रेलियाका ट्रेजरर जोश फ्रेडनबर्गले मंगलबार र सञ्चार मन्त्री पल प्लेचरले मंगलबार अपरान्ह सकारी गठबन्धनकमा ल्याउन लागिएको विधेयकमा केी परिवर्तन गर्ने सहमति जुटाएपछि यस्तो अवस्था बनेको हो ।
यस विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै दुबै मन्त्रीले संशोधनले न्यूज मिडिया विजनेसलाई कसरी आर्थिक रुपमा सबलीकरण गर्नेछ भन्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउने आशा व्यक्त गरेका छन् । फेसबुकका ग्लोबल न्यूज पार्टनरशिप उपाध्यक्ष क्याम्पबेल ब्राउनले कम्पनीले आगामी दिनमा न्यूज पेजहरुलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन हुन दिने बताइन् ।
उनले भने, “अष्ट्रेलियन सरकारसँगको थप छलफलबाट हामी एएटा सम्झौतामा पुगेका छौं जसमा हामीलाई हामीले छानेको प्रकाशकलाई सहायता गर्ने छुट हुनेछ । यसमा साना स्थानीय प्रकाशक पनि समावेश हुनेछन् । यसैकारण हामीले न्यूजलाई अष्ट्रेलियामा फेरि पुनस्र्थापित गर्दैछौं ।”